SIR CULUS:Erdoğan Oo Qudus u aqoonsaday Caasimadda Isra’il….Sababtu ogow… | Xaqiiqonews
SIR CULUS:Erdoğan Oo Qudus u aqoonsaday Caasimadda Isra’il….Sababtu ogow…
Wariyaha Wargeyska Qudus Al-carabiya IStanbuul Uga Soo Warama Ismacil Jamal ayaa qoray Warbixin Ku saabsan Qaabkii Adkeyda uu uu Uga falceliyey Madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdoğan arinka Qudus hase ahaatee Arinka dadka ku cusub ee uu wariyaha banaanka keenay ayaa ah xariirka hoose ee ka dhaxeeya dowladaha Turkiga iyo Isra’il.
Ismacil Jamal ayaa Warbixiiisa ku lafa guray shirarkii iyo go,aanadii adkaa ee ka soo baxay Erdogan kuwaasi oo si aan horay loo arag u weeraray Maamulka Trump balse wariyaha ayaa la yaabay siyaasada labo wajiilinimada ku dhisan ee Turkiga.
Wariye Jamaal ayaa soo qaatay Qeyb ka mid qoraalka heshiis ay horay u galeen dowladaha Turkiga iyo Isra’il heshiiskaasi sida ka muuqata waxaa uu Erdogan Qudus u aqoonsaday caasimada isra’il ka hor Go,aanka trump.
Qeyb ka mid heshiiska ayaa waxaa uu u qornaa sidan hoose
“heshiiskan Waxaa wada galay Ankara(Turkiga) iyo Qudus(Isra,il) taariikduna waa 28-06-2016”ta
hadaba sida ka muuqata heshiiska kore oo dhacay baratamihii sanadkii 2016 turkiga waxaa uu Qudus u aqoonsanaa caasimada yahuuda inkastoo Hadda Turkiga uu ku dhawaaqay go,aan diidmo ah.
Wargeys ku hadla afka cabraaniga laguna magacaabo Yedioth Ahronoth ayaa waxaa uu qoray in Falcelinadii ka dhashay Go,aanka trump ee ay la kulanto dowladda yahuuda midii ugu adkeyda in ay tahay facelinta Turkiga balse waxaa u Wargeyska intaasi sii raaciyey ” Wey adagtahay In aan Rumeysano Erdogan..Waana arin adag in aaan Aragno safiirka Turkiga oo ka baxaya Israil.. Runtii Arimahaasi oo dhan Ma ahan Kuwa Sahlan Marka La fiiriyo Saaxibtinmada Hoose Ee isra,il iyo Turkiga…”